दु:खद समाचार : अधुरो रहयो दुई छोरा, श्रीमति, बुवा र आमालाई भेट्ने धोको ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/दु:खद समाचार : अधुरो रहयो दुई छोरा, श्रीमति, बुवा र आमालाई भेट्ने धोको !
दु:खद समाचार : अधुरो रहयो दुई छोरा, श्रीमति, बुवा र आमालाई भेट्ने धोको !
बेनी,विदेशबाट आएर सदरमुकामको क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्कदै गरेका म्याग्दीका एक युवकको मंगलबार पहिरोमा पु’रिएर मृ’त्यु गएको छ। बेनी–जोमसोम सडक अन्तरगत अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढुङ्गामा ख’सेको पहिरोले पु’रिएर सोही पालिकाको ३ नम्बर वडामा पर्ने काभ्रेका ३२ वर्षीय झलक पुनको मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी किरनजंग कुँवरले जानकारी दिए। बेनीबाट काभ्रे स्थित घरतर्फ जाने क्रममा हिडिरहेको अवस्थामा भिरबाट ख’सेको पहिरोले पु’रिएका पुनको घटनास्थलमै मृ’त्यु भएको उनले बताए।
पुनसँगै रहेका अर्का एक जना पुरुषले भा’गेर ज्यान बचाएका छन्। प्रनाउ कुँवरका अनुसार पुन १४ दिन बेनीको क्वारेन्टाइनमा बसेर घर जाँदै थिए। कुवेतबाट आएका उनलाई पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना नभएको पुष्टि भएपछि घर पठाइएको थियो ।
वडा सदस्य समेत रहेका काभ्रेका हस्तबहादुर पुनका अनुसार झलक दुई वर्षअघि कुवेत गएका थिए। ‘क्वारेन्टाइन अवधि पुरा गरेर भोली घर आउँछु भन्दै हिजो फोन गरेका थिए,’ उनले भने ‘विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोनाबाट जो’गिएपनि प’हिरोले घर आइपुग्न दिएन।’पुनको घरमा दुई जना छोरा, श्रीमति, बुवा र आमा छन्। सिमा प्रहरी चौकी भुरुङ्ग–तातोपानीका प्रहरी र स्थानीयबासीले श’व नि’कालेका थिए। पहिरो ख’सिरहेको अवस्थामा जो’खिम मो’लेर श’व नि’कालेको उ’द्दारमा ख’टिएका प्रहरी जवान लक्ष्मण क्षेत्रीले बताए। सो ठाउँमा कालीगण्डकीले क’टान गरेर सडक साँ’घुरिएको छ।
कुलमान समर्थकमाथि बल प्रयोग गर्ने प्रहरीलाई कारवाही
साउनमा हरियोको महिमा र महत्व